नोकिया ३३१० को प्रतिस्पर्धामा आयो यो फोन, यस्ता छन् विशेषता
एजेन्सी बैशाख ११ – मोबाइल फोन बनाउने कम्पनी जिवीले सूमो टी ३००० फोन सार्वजनिक गरेको छ । कम्पनीको दाबी अनुसार यो एकपक फूल चार्ज भए ५० दिनको ब्याट्रि ब्याकअप दिनेछ । यसका साथै यो फोनको भारतीय मूल्य १ हजार ४ सय ९० तोकिएको छ जो नोकियो ३३१० (३४०० भारु) भन्दा आधाभन्दा कम छ । यो […]
वैशाखमा दुईवटा उल्का वर्षा हेर्न पाइने
काठमाडौँ, ६ वैशाख । मौसमले साथ दिएको खण्डमा वैशाख महिनामा नेपाली आकाशमा दुईवटा उ..
शनी ग्रहको चन्द्रमामा ‘जीवन सम्भव’
जोनाथन आमोस/बिबिसी चैत ३ – बरफले जमेको शनी ग्रहको उपग्रह इन्सेलाडस पृथ्वीपछि जीव..
फेसबुकमा प्राविधिक परिवर्तनः नक्कली अकाउन्ट हुनेहरु सावधान !
एजेन्सी बैशाख २ – फेसबुकले आफ्नो वेबसाइटमा केही प्राविधिक परिवर्तन गरेको छ जसमार..
फोन घुमाउने तरिकाले खुल्न सक्छ तपाईंले राख्नुभएको पासवर्डको राज
बीबीसी बैशाख २ – मोबाइल फोन घुमाउने तरिकामार्फत ह्याकरले पिन नम्बर र पासवर्डको ..
सामसङले अब दुईवटा स्क्रिन भएको स्मार्टफोन ल्याउँदै
एजेन्सी चैत ३१ – स्मार्टफोनमा नयाँ प्रविधिको कुरा आउँदा एप्पल र सामसङ शीर्ष स्थानमा छन् । सामसङले डुअल एज कर्भ्ड स्क्रिन भित्र्याएर संसारभरी नाम कमाएको छ । त्यसपछि अन्य कम्पनीले पनि यसलाई आफ्नो ‘हाइ एण्ड’ स्मार्टफोनमा दिइरहेको छ । रिपोर्टका अनुसार अब सामसङले दुईवटा स्क्रिन भएको स्मार्टफोनमा काम गरिरहेको छ । स्क्रिन घुम्ने स्मार्..
वैज्ञानिकहरुले बनाए कृत्रिम सूर्य
जर्मनी, चैत २७ – जर्मनीका वैज्ञानिकहरुले विश्वकै ठूलो कृत्रिम सूर्य बनाएका बनाउन सफल भएका छन् । १४९ वटा जेनन सर्ट आर्क ल्याम्पलाई प्रयोग गरेर उनीहरुले सो कृत्रिम सूर्य बनाउन सफल भएका हुन् । यसले सूर्यबाट पृथ्वीमा आउनेभन्दा १० हजार गुणा सौर्य विकिरण पैदा गर्न सक्छ । यसको मद्दतले पृथ्वीमा पाइने कुनै पनि धातु वा जिवित […]
जब दुई तारा अन्तरिक्षमा टक्राए
एजेन्सी काठमाडौँ, चैत २७ – वैज्ञानिकहरुले दुईवटा भर्खरै बनेका दुई ‘युवा’ ताराहरु एकआपसमा टक्कर खाएको तस्विर खिच्न सफल भएका छन् । ओरियोन नक्षत्रमा भएको यो घटना करिप ५ सय वर्ष अघि भएको थियो । जसबाट अन्तरिक्षमा ठूलो मात्रामा धुलो र ग्याँस फैलिएको थियो । अध्ययनकर्ताका अनुसार उक्त टकरावबाट हाम्रो सूर्यले १ करोड वर्षमा उत्पादन गर्ने [..
बीबीसी चैत २६ – फेसबुकमा कसैको अश्लिल तस्बिर सम्बन्धित व्यक्तिको अनुमती बिना पोष्ट गर्न चाहनेलाई रोक्ने तयारी भइरहेको छ । यस्तो प्रकारको पोष्टलाई रिभेन्ज पोष्ट भनिन्छ । फेसबुकले यस्तो प्रकारको तस्बिरलाई दोस्रोपटक पोष्ट गर्नका लागि पूर्ण रुपमा रोक लगाउँदैछ । यो रोक फेसबुक, मेसेन्जर र इन्स्टाग्राममा लागु गरिनेछ यद्यपी ह्वाट्सएपमा ..
आइफोन 8 आउँदै ? एप्पलले सामसङसँग मगायो ७ करोडवटा स्क्रिन
डेली मेल चैत २२ – हुन त एप्पल र सामसङ प्रतिद्वन्द्वी हुन् तर जब स्क्रिनको आपूर्तीको कुरा आउँछ, उनीहरुको सम्बन्ध मित्रवत् छ । आइफोन एटसम्बन्धि प्राप्त नयाँ जानकारी अनुसार कुपरटिनो कम्पनीले दक्षिण कोरियाली कम्पनीसँग ७ करोड ओलेड प्यानलको माग गरेको छ । उक्त भारी मागसँगै एप्पलको नयाँ फोन चाँडै नै सार्वजनिक हुनसक्ने आशंका गरिएको छ [&h..
डेली मेल चैत १९ – तपाईंले अहिलेसम्म विभिन्न प्रकारको सुविधासम्पन्न गगनचुम्बी भवन देख्नुभएको होला । तर आज हामी तपाईंलाई यस्तो भवनबारे जानकारी दिँदै छौं जसबारे थाहा पाउँदा तपाईं चकित पर्नुहुनेछ । यो बिल्डिङ पृथ्वीमा नभई पृथ्वीको चक्कर लगाइरहेको पुच्छ्रेतारासँग जोडिएको हुनेछ जुन पृथ्वीतर्फ झुण्डिरहेको हुनेछ । संसारको सबैभन्दा अग्लो..
अन्तरिक्षमा पहिलो पटक रिसाइकल्ड रकेट
एजेन्सी न्युयोर्क, चैत १८ – अमेरिकी व्यवसायी एलन मस्कको कम्पनीले शुक्रबार रिसाइकल्ड रकेट फाल्कन–९ अन्तरिक्षमा पठाएर इतिहास रचेका छन् । स्पेस एक्सले सोमबार यसको सफल परिक्षण गरेको थियो । अन्तरिक्ष प्रविधिमा यसलाई क्रान्तिकारी कदम मानिएको छ । कम्पनीले इन्टरनेसनल स्पेसन स्टेसनमा अन्तरिक्ष यात्रीहरुका लागि खाना र जरुरी सामान पठाउने ब..
सामसङको नयाँ फोन ग्यालेक्सी एस 8 , एस 8 प्लसमा के– के छन् विशेषता ?
बीबीसी चैत १७ – सामसङले आफ्नो नयाँ फोन ग्यालेक्सी एस एट र एट प्लस सार्वजनिक गरेको छ । यी दुबै फोनमा ‘होम बटन’ हटाइएको छ र एउटा नयाँ ‘भर्चुअल असिस्टेन्ट’ यसको विशेषतामा समावेश छ । यी दुई फोनको स्क्रिन साइज पछिल्लो वर्ष सार्वजनिक गरिएको सामसङ एससेभेन र एससेभेन एज जत्तिकै छ । नोट सेभेनमा आगो […]
घरभित्रबाट कुद्ने रेल (भिडियोसहित)
बेइजिङ – चीनमा १९ तले भवनको बीचबाट कुद्ने रेल निर्माण गरिएको छ । दक्षिण–पूर्वी सहर चोङकिङको क्षेत्रफल ३१ हजार वर्ग माइल रहेको छ जहाँ ४.९ करोड जनसंख्या बसोबास गर्छन् । त्यही भएर भौतिक निर्माण गर्नेहरु र सहरको विकास योजना गर्नेहरुले नयाँ–नयाँ तरिकाहरु अपनाउन बाध्य भएका छन् । १९ तले भवनको छैटौँदेखि आठौँ तल्लासम्म रेलवे स्टेसन [&hel..
नयाँ खोजः यो हो अँध्यारोमा चम्किने अचम्मको भ्यागुतो
वैज्ञानिकले अँध्यारोमा चम्किने भ्यागुतोको नयाँ प्रजातिको खोजी गरेको छ । यी भ्यागुतालाई दक्षिणी अमेरिकाको अर्जेन्टिनामा पाइएको हो । यो भ्यागुतोको माथि हरियो, पहेंलो र रातो रङको छिट्टा छन् । सामान्य उज्यालोमा यो रंग पोल्का डटजस्तै देखिन्छ तर अँध्यारोमा गहिरो निलो र हरियो रंग चम्किन्छन् । जब अनुसन्धानकर्ताले पराबैगनी किरणयुक्त एक फ..
किन रंगीन बन्दैछ अस्ट्रेलियाको समुद्र ?
तास्मानिया – अस्ट्रेलियाको तास्मानिया राज्यमा रहेको समुद्री तटमा यतिबेला अनौठो दृश्य देख्न पाइन्छ । प्रिर्जभेसन बेमा अल्गाल ब्लुमका कारण तटीय क्षेत्रको समुद्र निलो देखिने गरेको छ । विज्ञका अनुसार यो प्राकृतिक घटना स–साना जीवहरुले आफ्नो रक्षाका लागि शरीरलाई चम्किलो बनाउँदा हुने बताउँछन् । स्थीर पानीमा यस्तो दखिने गरिन्छ । यो विशा..
नयाँ फोन लिनुछ ? आउँदैछन् यी नयाँ धमाकेदार १० स्मार्टफोन
स्पेनको बार्सिलोनामा सम्पन्न मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस २०१७ (MWC 2017) मा थुप्रै कम्पनीले आफ्ना नयाँ स्मार्टफोनबाट पर्दा उठाएका छन् । यीमध्ये केही स्मार्टफोनले चर्चा बटुल्न सफल भयो भने कति यत्तिकै हराए । आज हामी तपाईंलाई कुन फोनले कति र कस्तो स्मार्टफोन सार्वजनिक गरे भन्ने विषयमा जानकारी दिइएको छ । नोकियाः नोकियाले MWC 2017 मार्फत ..
सार्वजनिक भयो संसारको सबैभन्दा सस्तो 4G फोन, धमाधम ‘प्रि–बुकिङ’
चीनको कम्पनी Cagabi Mobile ले संसारको सबैभन्दा सस्तो फोरजी फोन सार्वजनिक गरेको छ । कम्पनीले फोनको मूल्य लगभग ५ हजार तोकिएको छ । यति मूल्यमा साधारण विशेषता भएका Swipe konnect 5.1 र konnect Grand जस्ता स्मार्टफोन उपलब्ध छन् । यद्यपी, यो फोनमा विभिन्न प्रकारको विशेषता दिएको छ । डिजाइनः यो फोन मेटालिक फ्रेम र प्लाष्टिक […]
फेसबुकका प्रयोगकर्ताले वर्षौंदेखि कुरिरहेको विशेषता सार्वजनिक हुँदै
फेसबुकले अब त्यो विशेषता ल्याउँदैछ जसलाई तपाईंले वर्षौंदेखि कुरिरहनुभएको थियो । तपाईं पनि ती प्रयोगकर्तामध्येको एक हुनुहुन्छ जसले फेसबुकमा ‘डिसलाइक’ बटन चाहनुहुन्छ भने तपाईंको इच्छा चाँडै नै पुरा हुने भएको छ । यद्यपी, यो डिसलाइक बटन फेसबुकको न्यूज फिडमा नभई मेसेन्जरमा हुनेछ । टेक क्रन्चको रिपोर्ट अनुसार मेसेन्जरमा डिसलाइक बटनको ..
अब स्मार्ट कन्डम आउँदै : बताउने छ यस्ता कुरा
लण्डन – स्मार्ट वाच र स्मार्ट ग्लासपछि शरीरमा लगाउन मिल्ने प्रविधिप्रति आकर्षण बढिरहेको छ । घडी र चस्मापछि यस्ता नयाँ नयाँ उत्पादनहरु बजारमा आइरहेका छन्, जसमध्ये एक हो स्मार्ट कन्डम । यसको बिक्रीका लागि रजिस्ट्रेसन शुरु भइसकेको छ । यो स्मार्ट कन्डम निर्माण गर्ने कम्पनीले यसले विभिन्न प्रश्नहरुको जवाफ दिनेछ जसको बारेमा मानिसले कल..
अब सार्वजनिक भयो सुनको जलप लगाइएको नोकिया ३३१०, मूल्य थाहा पाउँदा चकित हुनुहुनेछ
केहि दिन पहिले नोकियाले आफ्नो प्रतिष्ठित मोडल नोकिया ३३१० लाई पुनः सार्वजनिक गरेको थियो । नोकियाको उक्त मोडल निकै साधारण डिजाइन र विशेषताका साथ सार्वजनिक भएको थियो । तर अब यो मोडलको लक्जरी मोडल ‘क्याभियर’ बजारमा आएको छ । यो फोनको सबैभन्दा विशेष कुरा यसको नाम नै हो । रुसका राष्ट्रपति ‘भ्लादिमिर पुटिन’ को नामबाट […]
हावार्ड मेडिकलको एक अध्ययनका अनुसार महिला धेरैजसो यस्ता पुरुषलाई मनपराउँछन् जो हरेक प्रकारले स्वस्थ हुन्छन् । साइकोलोजिस्ट डा. अनामिका पापडीकवालले महिलाले आफ्नो पार्टनरमा चाहने गुण यस्तो भएको बताउँछिन् । पेट बाहिर ननिस्किएकोः महिलाहरु निकै फिट पुरुष मनपराउँछन् । विशेषगरी पेट बाहिर ननिस्किएको पुरुष उनीहरु रुचाउँछन् । उपायः दिनको ..
सामसुङ ग्यालेक्सी एस एट लिक, यस्तो आउँदैछ नयाँ फोन
काठमाडौँ – धैरे मानिसहरु सामसुङको नयाँ एस एट फोनको प्रतिक्षामा रहेका छन् । फोन सार्वजनिक हुने समय नजिकिँदै जाँदा यस फोनको केही तस्विरहरु लिक भएका छन् । जसमा फोनमा चर्चामा रहेको नयाँ आर्टिफिसियल इन्टिलिजेन्स बटन समेत हुन सक्ने देखिन्छ । इभान ब्लास (@evleaks) ले फोनको तस्विर सार्वजनिक गर्दै लेखेका छन्, ‘सायद यो तपाईंहरुले प्रतिक्ष..
‘द आइकन इज ब्याक’ – यसवर्ष आफ्नो १७ वर्ष पुरानो मोबाइल सेटलाई दोस्रोपटक सार्वजनिक गरेर नोकिया पुनः चर्चामा आएको छ । उक्त पुरानो ह्यान्डसेट ३३१० को सर्वव्यापी चर्चा भइरहेको छ । यो ह्यान्डसेट पहिलो पटक सन् २००० मा सार्वजनिक गरिएको थियो । संसार स्मार्टफोनको विषयमा ठूलो स्क्रिन भएको इन्टरनेटमा बाँच्ने फोनतर्फ लम्किरहेका बेला वर्षौंप..
युट्युवलाई टक्कर : अब फेसबुक लाइभबाट पनि पैसा कमाउन सकिने
न्युयोर्क – अब फेसबुकको लाइभ भिडियोमा पनि विज्ञापन प्रकाशित हुने भएको छ । सिएनबिसीमा प्रकाशित रिपोर्टका अनुसार फेसबुकले आफ्नो ब्लगमा लाइभ स्ट्रिमरहरुले आफ्नो भिडियोमा विज्ञापन राख्न पाउने सुविधा दिइने जनाएको छ । एक पटकमा २० सेकेण्डसम्म लामो हुने विज्ञापन भिडियो शुरु भएको ४ मिनेट पछि देखिने छ र त्यसपछि प्रत्येक ५ मिनेटको अन्तरालम..